Mohamed Salah Oo Sheegay In Kabta Dahabka Ah Iyo Abaal Marin Kasta Oo Shaqsi Ah Uu Ka Door Bidayo In Liverpool Uu Kula Guulaysto Koobka UEFA Champions League. – GOOL24.NET
Mohamed Salah Oo Sheegay In Kabta Dahabka Ah Iyo Abaal Marin Kasta Oo Shaqsi Ah Uu Ka Door Bidayo In Liverpool Uu Kula Guulaysto Koobka UEFA Champions League.
Xidiga xulka qaranka Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa muujiyay sida uu u jecel yahay in uu kooxdiisa Reds ku hogaamiyo koobka UEFA Champions league isaga oo aan u arkin in abaal marinaha shaqsiga ah oo ay kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier league ka mid tahay kabta dahabka ah ee uu ku tartamayo.
Inkasta oo aanu Mohamed Salah meesha ka saarin in maskaxdiisa ay ku jirto ku guulaysiga kabta dahabka ah ee Premier league waxa uu haddana muujiyay waxa muhiimadiisa kowaad ah. Salah ayaa kabta dahabka ah ee gool dhalinta Premier league 30 gool ku haya isaga oo 5 gool sare uga baxay Harry Kane.
Sidoo kale Mohamed Salah ayaa hogaaminaya kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub isaga oo Lionel Messi hal gool ka sare maray wuxuuna sidoo kale u sharaxan yahay abaal marinta xidiga sanadka ee horyaalka Premier league ugu fiican oo uu liiska lixda xidig ku soo baxay.
Mohamed Salah oo ka hadlaya haddii la kala dooransiiyo waxyaabaha uu jeclaan lahaa in uu xili ciyaareedkan ku guulaysto ayaa ku jawaabay: “Haddii aad doorasho haysato miyaa?, ku guulaysiga Champions League. Dabcan Champions League-ga. ku guulaysiga Champions League ayaa ah, anigu wax shaki ah kama qabo Champions League, waxa kale ma daneeyo”.
Mohamed Salah oo ka hadlaya kabta dahabka ah ayaa yidhi: “Kabta dahabka miyaa?, dabcan been ma sheegi karo oo maskaxdayda ayay ku jirtaa. Laakiin waad ogtihiin oo waxaad aad maanta arki kartaan sida qof kasta oo kooxda ahi iskugu dayayo in ay kubbada ii basaan aniga si ay ii caawiyaan, waxaan sido kale hubaa in ciyaartoyda Tottenham ay isku dayayaan inay caawiyaan Harry Kane”.
Mohamed Salah oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Sidoo kale ciyaartoyda Manchester City waxay isku dayayaan in ay Sergio Aguero caawiyaan, waa sidaas oo kale, laakiin dhamaadka waxaanu u ciyaarnaa ka koox ahaan. Wali waxaanu haysanaa afar kulan, iyaguna waxay haystaan shan kulan. Sidaa daraadeed, waa in aan kulamadayda ka fikiro oo aan eegno”.
Mohamed Salah ayaa u baahan in uu dhaliyo 7 gool si uu u barbareeyo rekoodhka taariikhiga ah ee kooxdiisa Liverpool u yaal kaas oo xili ciyaareedkii 1983/84 kii dhigay halyayga Reds ee Rush kaas oo xili ciyaareedaas Liverpool u dhaliyay 47 gool halka Mohamed Salah uu hal gool u jiro rekoodhkii gool dhalinta premier League ee Luis Suarez kaas oo 31 gool Reds u soo dhaliyay xili ciyaareedkiisii ugu danbeeyay.
Mohamed Salah ayaa sheegay in uu aad ugu dhaw yahay rekoodhkii halyayga kooxdiisa ee Rush wuxuuna isaga oo arintan ka hadlaya yidhi: ” Aad ayay u dhawdahay, kaliya waa todoba gool, laakiin aan aragno”. Mohamed Salah ayaa ka hor iman doona kooxdiisa hore ee Roma ee kulanka afar dhamaadka UCL.